Ny zanak’Israely, nirafitra ho foko roa ambinin’ny folo dia nizara roa taorian’ny nahafatesan’i Salomona (922 a.C), Jodà tany atsimo [niaraka tamin’i Benjamina sy Simeona,], ary ny Zanak’i Josefa roa (Efraima sy Manase) tany avaratra [niaraka tamin’ny ambiny fa ny taranak’i Levi tsy nisaina fa tsy manan-tany, tahaka ny taranak’i Dina, vavitokana zanak’i Lia, Jen 34], avy eo dia rava tanteraka ny fanjakana, ny avaratra naharitra hatramin’ny 724 a.C (2 Mpanj 17, 3-6, faharavan’i Samaria) ka lasan-ko babo tany Asirìa, ny atsimo koa naharitra hatramin’ny 587 a.C. ka nentin’i Nabokodonozora natao sesitany tany Babilonina (2 Mpanj 24, 20). Na eo aza anefa izany dia nasain’Andriamanitra nanao hazo roa manambara ireo fanjakana roa ireo Ezekiela ka hanambara fa hain’Andriamanitra ny hamory indray azy ireo, avy any amin’izay nielezany, ka Mpanjaka araka ny sitrak’Andriamanitra no hifehy azy ireo mandrakizay, araka ny fanekem-pihavanana mandrakizay ataon’YHWH ho azy ireo: Andriamanitra no hanangana ny fitoerany masina mandrakizay eo anivon’ny vahoakany.
Fantatsika fa ao amin’i Jesoa, ilay Emanoela, Andriamanitra monina eto anivontsika no tanteraka izany fampanantenana izany, ka tsy Israely sy Jodà ihany fa ny olombelona rehetra no voaantso hiombona amin’izany hasambarana izany, Ejipta sy Asora nanjanaka azy aza, hiaraka hanompo an’Andriamanitra miaraka amin’Israely (Isaia 19, 23-24). Olona iray no ho solo voina hahatanterahan’izany, araka ny faminanian’i Kaifa, lehiben’ny mpisorona tamin’izany (18-36 d.C.). Amafisin’i Joany kosa izay lazan’ny Evanjely hafa fa ny “zanak’olona dia hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro” (Mt 20, 28).
[Raha noho ny soa ho an’ny vahoaka sy noho ny fitsinjovana ny aina, ny taona 2020 dia tsy afaka ny hankalaza ny Paka miaraka akory ny kristianina maro be, tsy midika anefa izany fa banga ny fiainam-panahy. Ny fiombonana miara-mandresy ny valanaretina, miara-mikatsaka ny soa dia Sakramenta manambara ny fitiavana izany, tsy fahabangana satria tsy hoe natakalo zavatra hafa ny fiombonana amin’i Kristy sy ny Fiangonana, fa kosa Sorona, satria ny fitiavany no manery antsika hihafy sy hisikim-ponitra ho an’ny soa ho antsika sy izao tontolo izao].